SCG Foundation Cares for Thai and Myanmar People, Launches Video “Never Give Up” To Encourage Self-Care for Maintaining Well-Being During COVID-19 - SCG Foundation
The video clip is available in two languages: Thai and Burmese. The video shows simple ways to practice self-care, such as wearingaface mask, washing hands, and keeping physical distance. The project collaborates with Migrant Health Volunteers (MHVs) and Village Health Volunteers (VHVs), who appear in the video to demonstrate self-care tips to provide care to everyone.
Watch and share the video “Never Give Up” on Youtube: scgfoundation or Facebook page: SCG Foundation.
SCG ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ထိုင်းနှင့်မြန်မာပြည်သူတို ့အား စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြီးစွာဖြင့်
မိမိကိုယ်ကိုယ် ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်မှ နောက်တစ်ကြိမ်ကာကွယ်နိုင်ရန် “လက်မလျှော့ဘူး” ပညာ ပေး ဗီဒီယို ကို ပေးပို ့လိုက်ပါတယ်။
ဤဗီဒီယိုကို ထိုင်းနှင့်မြန်မာနှစ်ဘာသာ ဖြင့်တင်ဆက်ထားကာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ လက်ဆေးခြင်းနှင့် ခပ်ခွာခွာနေထိုင်ခြင်းများ ကဲ့သို ့လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများဖြင့်
မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက် ပုံ များ ကို သရုပ်ဖော် ထား သည်။
အားလုံးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန် ဂရုစိုက်မှုများကို မျှဝေပေးပို ့နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ နိုင်ငံခြားသားကျန်းမာရေးစေတနာ့ဝန်ထမ်းမောင်နှမများနှင့် ရပ်ကွက်ကျန်းမာရေးစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏
YouTube : scgfoundation သို့မဟုတ်
Facebook page : มูลนิธิเอสซีจี (SCG ဖောင်ဒေးရှင်း)
တို ့မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကာ ထပ်ဆင့်ဝိုင်ဝန်းမျှဝေနိုင်ပါသည်။